3 Talaabo oo loogu talagalay Istaraatiijiyad Dijital ah oo Xoog leh oo loogu talagalay daabacayaasha wade ka qaybgalka & Dakhliga | Martech Zone
3 Talaabo oo loogu talagalay Istaraatiijiyad Dijital ah oo Xoog leh oo loogu talagalay daabacayaasha wada Wadashaqeynta & Dakhliga
Arbacada, Agoosto 26, 2020 Arbacada, Agoosto 26, 2020 Jeff Kupietzky
Maaddaama macaamiisha ay si isa soo taraysa ugu soo dhaqaaqeen isticmaalka wararka khadka tooska ah isla markaana ay haystaan ​​xulashooyin kale oo badan, daabacayaasha daabacaada ayaa arkay dakhligooda oo aad hoos ugu dhacay. Qaar badanna, way adkayd in lala qabsado istiraatiijiyad dijitaal ah oo run ahaantii shaqeysa. Paywalls badanaa waxay ahaayeen musiibo, kaxeystayaasha macaamiisha iyagoo kaxeynaya waxyaabo badan oo bilaash ah. Xayeysiisyada muuqaalka ah iyo waxyaabaha la kafaala qaaday ayaa ka caawiyay, laakiin barnaamijyada tooska loo iibiyo waa kuwo xoog badan oo qaali ah, taasoo ka dhigaysa inay gebi ahaanba ka gaaraan kumanaan kun oo daabiciyayaal yaryar ah.
U adeegsiga shabakad xayeysiis ah si loo buuxiyo tiknoolajiyada xoogaa waa lagu guuleystay, laakiin kuwani waxay si weyn ugu tiirsan yihiin cookies-ka loogu talagalay bartilmaameedka dhagaystayaasha, iyagoo abuuraya afar jidgooyooyin waaweyn. Marka hore, buskudyadu weligood sax ma ahayn. Iyagu waa qalab gaar ah, sidaa darteed ma kala sooci karaan inta badan isticmaaleyaasha aaladda la wadaago (kiniin ay isticmaalaan dhowr xubnood oo reerka ah, tusaale ahaan), taas oo macnaheedu yahay xogta ay ururiyeen inay tahay mid mugdi ku jiro oo aan sax ahayn. Kukiyada sidoo kale ma raaci karaan isticmaaleyaasha hal aalad ilaa qalab kale. Haddii isticmaaluhu ka beddelo laptop-ka una wareego taleefanka gacanta, raadadkii buskudku wuu lumay.
Marka labaad, buskudku ma xulasho. Ilaa dhowaan, kukisyadu waxay la socdeen dadka isticmaala gebi ahaanba iyaga oo aan ogolaansho ka haysan, badiyaaana iyaga oo aan aqoon lahayn, kor u qaadista walaacyada asturnaanta. Saddexaad, xayeysiisyada xayeysiinta ah iyo daalacashada gaarka loo leeyahay ayaa kibosh saaray raadinta kuleylka ku saleysan sida warbixinnada warbaahinta ee ku saabsan sida shirkadaha ay u adeegsanayaan - ama si xun u isticmaalida, maadaama kiisku noqon karo - xogta dhagaystayaasha ayaa baabi'isay kalsoonidii, taasoo ka dhigaysa dadka isticmaala inay sii kordhaan shakiga iyo raaxo la'aanta. Ugu dambayntiina, mamnuucitaankii ugu dambeeyay ee ku saabsan cookies-ka saddexaad ee dhammaan daalacashada waaweyn ayaa si aad ah u tarjumay cookies cookies-ka shabakadda xayeysiiska ah oo aan waxba ka jirin.
Dhanka kale, daabacayaashu waxay sidoo kale la halgameen inay ka faa'iideystaan ​​shabakadaha bulshada si ay u wadaan dakhli-ama laga yaabee inay si sax ah u badan yihiin, shabakadaha bulshada ayaa ka faa'iideystay daabacayaasha. Kaliya maahan in barnaamijyadan la xaday qayb weyn oo ka mid ah xayeysiinta, laakiin sidoo kale waxay riixeen waxyaabaha madbacadaha ka dhigaya kuwa la diidan yahay, iyaga oo ka dhacaya madbacadaha fursad ay ku hor yimaadaan dhagaystayaashooda.
Iyo jugtii ugu dambeysay: taraafikada bulshada waa 100% taraafikada gudbinta, taas oo macnaheedu yahay haddii adeegsadee uu gujiyo bogga daabacaha, daabacaha ayaa eber ka heli kara xogta isticmaalaha. Sababtoo ah ma baran karaan kuwa booqdayaasha tixraaca ah, suurtagal maahan in la barto danahooda oo loo isticmaalo aqoontaas in loogu adeego wax badan oo ka mid ah waxa ay jecel yihiin inay ku sii hayaan iyaga oo ku soo laabanaya.
Marka, maxaa daabiciye sameeyaa? Si loola qabsado xaqiiqadan cusub, daabacayaashu waa inay si aad ah u xakameeyaan xiriirka dhagaystayaashooda ayna dhisaan isku xirnaan hal-hal-hal ah oo adag halkii ay ku tiirsan lahaayeen dhinacyada saddexaad. Waa tan sida loogu bilaabi karo istiraatiijiyad saddex-tallaabo ah oo dijitaal ah taas oo dhigeysa daabacayaasha hoggaanka isla markaana dhaqaajineysa dakhliga cusub.
Tallaabada 1: Lahow Dhageystayaashaada
Lahow dhagaystayaashaada. Halkii aad ku tiirsan lahayd dhinacyada saddexaad sida 'cookies' iyo kanaallada bulshada, halkii, waxaad xoogga saartaa sidii aad u dhisi lahayd saldhiggaaga macaamiisha adoo u maraya saxiixyada joornaalada emailkaaga. Sababtoo ah dadku marar dhif ah ayey waligood wadaagaan cinwaanka emaylka, waana isku mid qalab kasta, emaylku waa aqoonsi ka khaas ah oo wax ku ool ah oo ka badan cookies. Oo ka duwan kanaalada bulshada, waxaad si toos ah ula macaamili kartaa isticmaaleyaasha emaylka, adigoo jaraya ninka dhexe.
Hawlgalkan tooska ah, waxaad bilaabi kartaa inaad dhisto sawir dhammaystiran oo ku saabsan waxa isticmaalayaashu rabaan adoo raacaya dhaqankooda iyo barashada danahooda xitaa qalabka iyo kanaalada. Iyo, maxaa yeelay emaylka ayaa si buuxda u doorta, adeegsadayaasha ayaa si otomaatig ah kuu siiyay rukhsad aad ku baratid dhaqankooda, markaa waxaa jira heer aad u sarreeya oo kalsooni ah.
Tilaabada 2: Ka Bixi Kanaleyaasha La Leeyahay Kanaalka Saddexaad
Adeegso wadiiqooyin toos ah sida iimaylka oo ku riix ogeysiisyada si aad ula macaamisho macaamiisha inta ugu macquulsan bedelkii bulshada iyo raadinta. Mar labaad, bulsho ahaan iyo raadinta, waxaad gelineysaa dhinac saddexaad gacan ku haynta xiriirka dhagaystayaashaada. Iridjoogayaashan kaliya ma xukumaan dakhliga xayeysiiska laakiin sidoo kale xogta isticmaale, waxay kaa dhigayaan wax aan macquul aheyn inaad wax ka barato waxyaabaha ay jecel yihiin iyo waxyaabaha ay xiiseeyaan. U wareejinta diiradaada kanaallada aad maamusho waxay ka dhigan tahay inaad adigu sidoo kale maamusho xogta isticmaaleha.
Tallaabada 3: U dir Mawduuc la Xiriira, Mawduuc Gaar ah
Hadda oo aad wax badan ka ogtahay waxa macmiil kasta doonayo, waad ka faa'iideysan kartaa kanaalladaas si aad ugu dirto waxyaabaha shakhsiyan shaqsiyan shaqsi ahaantiisa u gaarka ah. Halkii laga heli lahaa dufcad-iyo-qarax, hal-ku-habboon-dhan emayl ama fariin u socota macmiil kasta, u dirista waxyaabaha loo habeeyay ayaa la caddeeyay inay aad uga waxtar badan tahay ka qeyb qaadashada macaamiisha iyo kobcinta xiriir waara.
Waayo, Ciyaaraha GoGy, Barxad ciyaaraha internetka ah, dirista ogeysiisyada riixitaanka gaarka ah ayaa qeyb weyn ka ahaa istiraatiijiyadooda kaqeybgalka guusha.
Awoodda lagu diro farriinta saxda ah iyo ogeysiiska ugu habboon ee adeegsade kasta aad ayey muhiim u tahay. Waxay raadinayaan wax shakhsi ahaaneed, iyo caannimada ciyaarta sidoo kale aad ayey muhiim u tahay. Waxay rabaan inay ciyaaraan waxa qof walba ciyaarayo taasna kaligeed ayaa ka caawisay wadista heerarka riix-ku-celinta si aad ah.
Tal Hen, Mulkiilaha GoGy
Istaraatiijiyaddan maadadeed ee loo habeeyay waxaa horeba u adeegsaday daabacayaasha sida GoGy, Assembly, Salem Web Network, Dysplay iyo Almanac beeraleyda:
samatabbixi in ka badan 2 bilyan ogeysiis bil
Kaxee a 25% kor u qaadista taraafikada
Kaxee a 40% kordhinta aragtida bogga
Kaxee a 35% kororka dakhliga.
In kasta oo istiraatiijiyaddu xaqiijisay inay waxtar leedahay, waxaad isweydiin kartaa:
Ayaa leh waqti iyo ilo si uu ugu diro emayllada shaqsi ahaanta ah una riixo ogeysiisyada boqolaal kun ama malaayiin macaamiil ah?
Taasi waa meesha otomaatiggu ka yimaado Jeeng waxaa qoray PowerInbox madalku wuxuu bixiyaa xal fudud, otomaatig ah si loogu diro farriin gaar ah iyo ogeysiisyo emayl ah macaamiisha iyada oo eber dadaal gacan-ku-hayn ah. Waxaa si gaar ah loogu dhisay daabacayaasha, tikniyoolajiyada barashada mashiinka Jeeng wuxuu bartaa dookha isticmaalaha iyo habdhaqanka khadka tooska ah si loogu adeego ogeysiisyo aad u khuseeya, la habeeyay lana bartilmaameedsaday oo kaxeynaya kaqeybgalayaasha isticmaalaha.
Marka lagu daro bixinta xal otomaatig ah oo buuxa, oo ay kujirto awoodda jadwalka ogeysiisyada si loo wanaajiyo kaqeybgalka, Jeeng xitaa wuxuu u oggolaanayaa daabacayaasha inay lacag kahelaan riixitaankooda iyo emaylka loo diro si loogu daro dakhli dheeri ah oo dheeri ah. Iyo, iyadoo la adeegsanayo qaabka wadaagista dakhliga ee Jeeng, daabacayaashu waxay ku dari karaan xalkaan waxqabadka iswada otomaatiga ah ee xoogga leh eber qiimaha hore.
Iyadoo la dhisayo istiraatiijiyad qaybinta waxyaabaha shakhsi ahaaneed oo ka faa'iideysanaya kanaallo u oggolaanaya daabacayaasha inay yeeshaan xiriirka dhagaystayaasha, daabacayaashu waxay wadi karaan taraafikada badan-iyo taraafikada tayada sare leh-oo ay dib ugu noqdaan bogaggooda, sidaas darteedna waxay kexeynayaan dakhli sare. Barashada waxa ay dhagaystayaashaadu jecelyihiin ayaa gabi ahaanba muhiim u ah hawshan adiguna si fudud uma sameyn kartid taas marka aad ku tiirsan tahay dhinac saddexaad, wadiiqooyinka gudbinta. La wareegida xakamaynta xiriirkaas kanaalka la leeyahay ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu dhisi karo istiraatiijiyad dhijitaal ah oo kobcinaysa dhagaystayaashaada iyo dakhligaaga.
Si loo barto sida Jeeng-ka si otomaatig ah u shaqeynaya ee PowerInbox uu ku caawin karo:
Saxiix Demo Maanta
Tags: xayeysiisyadaqaybinta waxyaabahacookiesjeengbarashada mashiinkaogeysiisyada mobiladadooran inleedahaywarbaahintu leedahayboostadariix ogaysiisyadakanaalada gudbinta
Tirakoobka 2020 CRM: Isticmaalka, Faa'iidooyinka & Caqabadaha Kaabbadaha Maareynta Xiriirka Macaamiisha
Baro Sida Loo Kordhiyo Dakhliga Adoo Ka Faa'ideysanaya Awoodda Wanaagsan Ee Sanduuqa Raadinta Yaryar